Niknayman: မြန်မာပြည်အတွက် အထူးဆုတောင်းပွဲ ပါဝင်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်အတွက် အထူးဆုတောင်းပွဲ ပါဝင်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Show your solidarity: Postaphoto!
လာမည့်ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်သော လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်၏ (၆၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်းပွဲအား ယခု အင်တာနက်ပေါ်အွန်လိုင်းမှ မိမိတို့ ဆုတောင်းလိုသော ဖေါ်ပြလိုသောပုံရိပ်များဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ယခုအနင်တာနက်အွန်လိုင်းဆုတောင်းပွဲအား ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက်လည်း ဆက်လက် စီစဉ်ထားပေးပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှသာမက နိုင်ငံတကာမှပါ ပါဝင်ဆုတောင်းနိုင်ပြီး အမြဲဖေါ်ပြထားမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ဆုတောင်းထားမှုများအားလည်း ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ဆုတောင်းထားမှု များအားလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
On the occassion of Daw Aung San Suu Kyi's 63rd birthday - June 19, 2008 - Ethical Traveler is reviving the Candles for Burma campaign.
လက်ရှိတွင်နေအိမ်အကျဉ်းကျခံနေရသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်း ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။
Show your solidarity with Aung San Suu Kyi and all the prisoners of conscience in Burma.
ထို့ အတူ နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးကျရောက်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြသော၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားကြသော၊ မိသားစုကွဲကွာသွားကြသော၊ စားဝတ်နေရေးဒုက္ခရောက်နေကြသော မြန်မာပြည်သူများအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
Show your solidarity with the victims of Cyclone Narigs.
မိမိတို့ဆုတောင်းမှုများနှင့်အတူ ဖေါ်ပြလိုသော ပုံရိပ်များအား ယခုနေရာတွင် ဖိုင်အမျိုးအစား jpeg (သို့ ) png ဖြင့် အရွယ်အစား 5MB ထက်မပိုသော ပုံများအား မိမိတို့ ဘာသာ ဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။
Format: JPEG or PNG. Max size: 5MB.
မြန်မာပြည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ပေါ်ပေါက်ထွန်းကားရေးအတွက် မြတ်နိုးသူ ဆောင်ရွက်လိုသူ မည်သူမဆို ပါဝင်ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။
Who: Supporters of democracy and human rights in Burma
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ် (၆၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆုတောင်းခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးနှင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်းကို အထူးရည်ရွယ်ကာ စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဆုတောင်းကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
What: On the occassion of Aung San Suu Kyi's 63rd birthday, contributeadigital photo in solidarity with the prisoners of conscience in Burma and the victims of Cyclone Nargis in Burma's Irrawaddy delta region.
လာမည့် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ သည် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် နေအိမ်အကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆန္ဒရှိကြပါကြောင်း မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူများသိရှိကြစေရန်၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေး စစ်မှန်စွာ ရရှိရေးအတွက် ပြသကြရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Why: June 19, 2008, is the 63rd birthday of Aung San Suu Kyi, the democratically elected leader of Burma. Burma's ruling military junta currently has her under house arrest, and cut off from the outside world. With these birthday wishes, we seek to show our solidarity with those promoting democracy and human rights in Burma. Your photo also tells the people of Burma that people around the world are watching.
ဆုတောင်းမှုလေးတွေကို မိမိတို့နှစ်သက်ရာ သင့်တော်သောပုံရိပ်လေးများနှင့် ဖေါ်ပြပေးကြဖို့ဖြစ်ပါသည်။
How: Uploadaphoto that conveys your solidarity. Makeasign, lightacandle, writeacard - express yourself in any way you choose. Consider taking your photo in front ofafamous landmark that shows your geographic location (in front of the Eiffel tower, on the Great Wall of China, etc.)
အောက်ဖေါ်ပြပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာ လင့်ခ်အား နှိပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။
Where: Online, at http://www.ethicaltraveler.org/candles
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း မှတ်တမ်းအကျဉ်းချူပ်လေး တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါသည်။
Brief background: Aung San Suu Kyi isakey figure in the Burmese democracy movement, and daughter of Burma's founding father, Aung San, who was assassinated by political opponents in 1947. Aung San Suu Kyi has been under house arrest in Burma for most of the past 14 years.
Various military dictatorships have ruled Burma sinceamilitary coup in 1962;amilitary junta has ruled Burma since 1988. The junta refused to hand over power to opposition leader Aung San Suu Kyi after her party - the National League for Democracy (NLD) - won over 80% of the seats ina1990 parliamentary election. In 1991, Aung San Suu Kyi received the Nobel Peace Prize for her commitment to peaceful change.
Environmental and human rights abuses under the junta are widespread and well documented. Examples include rape, torture, burning of entire minority-inhabited villages, use of forced labor for infrastructure projects - such as tourism facilities - and, most recently, in blocking relief efforts for an estimated 2.5 million cyclone victims.
ယခု အင်တာနက်အွန်လိုင်း ဆုတောင်းမှုကို မြန်မာပြည်သူများနှင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူများအားလုံး သိရှိကြစေရန် ၀ိုင်းဝန်းဖေါ်ပြပေးကြဖို့ ကိုလည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ မိမိတို့မိသားစုများ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအား စာရေးအသိပေးခြင်း၊ မိမိတို့အင်တာနက်စာမျက်နှာများ ဘလော့များ ဖိုရမ်များ အီးမေးလ်အုပ်စုများတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးခြင်းတို့ ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
- Forward this email to your friends.
- Addapage about this campaign to your website.
- Tell your favorite blogger about Candles for Burma.
Candles for Burma isacampaign of EthicalTraveler.org and the Burmese American Democratic Alliance (BADA). Ethical Traveler is the first grassroots alliance uniting adventurers, tourists, travel agencies, and outfitters - everyone who loves to travel and sees tra
travel asapositive force in the world. We feel that all travelers are, in effect, freelance ambassadors. By joining our voices and our economic power, we seek to strengthen human rights and protect the environment. Ethical Traveler isaproject of the Earth Island Institute. BADA isaSan Francisco Bay Area based non-profit, working on humanitarian assistance projects and on bringing democracy and freedom to the people of Burma.
ယခု အင်တာနက်စာမျက်နှာအွန်လိုင်း မြန်မာပြည်အတွက် အထူးဆုတောင်းပွဲအား EthicalTraveler အဖွဲ့ နှင့် the Burmese American Democratic Alliance (BADA) အဖွဲ့ တို့ မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဘလော့ဂါ နစ်နေမန်းမှ ယခုနှစ်တွင်ကျရောက်သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးနှင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းမှုအစီအစဉ်အား ထပ်မံတိုးချဲ့ ကာ ၀င်ရောက်အားဖြည့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Special thanks for this campaign to:
Niknayman on niknayman.blogspot.com (or) niknayman-niknayman.blogspot.com
The Burmese American Democratic Alliance (BADA):
Bay Area Join Action Committee - Burma Relief for Cyclone Nargis
(510) 451 0267
Posted by Niknayman at 10:38 AM